Izinsiza Zokumisa Isihlabathi & Gravel Dredging - Ellicott Dredges
Izimbiwa / Isihlabathi & neGravel
Lapho izinto ezifana nesihlabathi nohlalu, amaminerali, noma umsila kungaphansi kwetafula lamanzi noma kumachibi okugcina, ukumayini nge-cutter suction dredge kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokuthola nokuhambisa izinto ngocingo kumshini wakho wokulungisa.
Amasistimu we-Ellicott's heavy-duty dredge enzelwe ukukhiqizwa okusebenzayo nokunokwethenjelwa kwesikhathi eside kuwo wonke umjikelezo wokuphila kwemayini yakho. Abanikazi bezimayini basebenzisana eduze nethimba lethu lochwepheshe bokudonsa ngaphambi kokuthenga futhi basekelwa ngu-Ellicott ngokufaka i-dredge.
I-Ellicott inikela ngamamodeli amaningi we-dredge afaneleke kahle kunoma iyiphi iphrojekthi yosayizi enhlabathini nasezimbonini zezimayini. Ithimba lethu lokuthengisa elinolwazi lizosebenza nawe ukukhomba imodeli efaneleke kakhulu ezidingweni zephrojekthi yakho.
Xhumana Nathi Ngezidingo Zakho Zokudonswa
I-12 ”x 10” (300 mm x 250 mm)
Ishidi EqondileBuka ividiyo
Uchungechunge 670 Dragon® Dredge
I-14 ”x 14” (350 mm x 350 mm)
Uchungechunge 870JD Dragon® Dredge
Uchungechunge 1270 Dragon® Dredge
I-18 ”x 18” (450 mm x 450 mm)
Uchungechunge 4170 Super Dragon ™ Dredge
I-27 ”x 24” (700 mm x 600 mm)
Ama-Dredges ngokwezifiso nezici ezikhethekile
Ukwehliswa kweSand & Gravel
Ukususa isihlabathi esicwilisiwe & i-gravel kungenye yokusetshenziswa okuthandwa kakhulu kwedredge. I-Sand & gravel ekhishwe olwandle nasezimayini ezivalekile zinikezela ngomkhakha wezokwakha womhlaba jikelele. Akunandaba ukuthi iphrojekthi yakho ikuphi, i-Ellicott® inikela ngezinketho ezahlukahlukene zemishini yokwehlisa ongakhetha kuzo kufaka phakathi i-cutterhead dredges ephathekayo, ama-swinging ladder dredges, noma ama-dredges akhiwe ngokujula okwenziwe ngokwezifiso nangamabhakede.
I-Ellicott® brand dredges yakhelwe ukugcina ukunikela ngomklamo osindayo ongaphatha izimo ezimbi kakhulu ngenkathi uhlala kulula ukuwuhambisa. Akunandaba ukuthi inkulu kangakanani noma incane kangakanani iphrojekthi yakho yesihlabathi & yamatshe, i-Ellicott Dredges ingaklama futhi yakhe i-dredge ngesikhathi nangesabelomali esihlangabezana nezidingo zakho ezithile.
Sebenzisa ama-dredges kuyindlela ebonakalayo yokukhipha isihlabathi, i-gravel, i-Frac Sand, i-Iron Ore noma i-Coal Fine Tailings, namanye amaminerali. Akunandaba ukuthi iphrojekthi yakho yezimayini yeqise kangakanani i-Ellicott® ine-dredge eyenzelwe ngokukhethekile ukuhlangabezana nezidingo. Ukumbiwa phansi ngedredge kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokuthola izinto ngokungaguquguquki, noma ngabe kuyisihlabathi, i-gravel noma okufakwayo kasawoti onzima.
Ukubuyisa noma ukuqeda ukusikwa kwezimayini ngokumba kabusha kungumsebenzi obalulekile ogcina ezinye izimayini zisebenza kahle. Izicelo ezijwayelekile zomsila ze-Ellicott® brand dredges, phakathi kokunye, emkhakheni wamalahle, wensimbi, wegolide nowoyela. Sebenzisa i-dredge yokufuna kabusha ukusika cishe njalo kunenzuzo enhle kutshalo-mali.
I-Ellicott® inomlando wokwakha ama-dredges ahlukahlukene angahle aklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo zephrojekthi ethile yamakhasimende ethu. Kuyo yonke le minyaka, i-Ellicott® ihlinzekele ama-dredges for tailings amaphrojekthi kumakhasimende aseCanada, eDominican Republic, ePhilippines nakwamanye amazwe emhlabeni jikelele.
Ukudonswa Kwezimayini Ezikhethekile Zikagesi - "I-Cooljarloo I"
Ukuphinda kuphindwe kwenziwe kabusha kwe-Mining Tailings nge-Ellicott 370 Dragon® Dredge